အခမဲ့ SZ Scalper EA ၏ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်အခမဲ့ SZ Scalper EA ၏
၏အခမဲ့ဗားရှင်း SZ Scalper ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး။ ကိုယ်ကသာဝယ်ပါရာထူးဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါ EA ၏ထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံရေးအဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ အများအပြားကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများထည့်သွင်းထားပါသည်။
ဤ ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ကုန်သွယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည် EURUSD M5 အချိန်ဘောင်ပေါ်မှာ။ MetaTrader4terminal ကိုသုံးနိုင်သည်။
အခမဲ့ SZ Scalper EA ၏ - Parameters
EAMagic - ကို EA ရဲ့မှော်အရေအတွက်ကို။ "ပြည်တွင်း" မှော်နံပါတ်များကိုလည်းအသုံးပြုကြသည်: 752653, 752654, 752655 ။
AutoLot - ရန် "စစ်မှန်သော" သို့မဟုတ် "အယူမှား" သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ "စစ်မှန်တဲ့" ဟုသတ်မှတ်သောအခါ, EA ၏ချိန်ခွင်လျှာတန်ဖိုးကိုပေါ် မူတည်. ကုန်သွယ်ဘို့စာရေးတံအရွယ်အစားရွေးချယ်သည်။
RiskZ - စာရေးများ၏အလိုအလျှောက်တွက်ချက်အတှကျအသုံးပွုသိုက်၏ရာခိုင်နှုန်း။
စာရေး - AutoLot ၏တန်ဖိုး 'အယူမှား "ဖြစ်ပါတယ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးအရွယ်အစားအသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
SpreadLevel - ထို EA ၏ကုန်သွယ်မှုတံ့သောအချိန်တွင်အများဆုံးပျံ့နှံ့။
TPPips - TakeProfit တန်ဖိုးကို မှတ်ပါ။
TrailingStop - ရပ်တန့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကပ်တွယ်မှုကို။0- မသန်စွမ်း။
MaxDD - ချိန်ခွင်လျှာ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်အများဆုံး drawdown အဆင့်အထိ။
TerminalGMTshift - ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်မှဆွေမျိုး terminal ကိုသင့်ရဲ့ပွဲစားများ၏အချိန်ပြောင်းကုန်ပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင့် terminal ကိုဖွင့်အချိန် 21 လျှင်: 00 နှင့်ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်အချိန် 19 ဖြစ်ပါသည်: 00, သို့ဖြစ်လျှင်ဤ parameter သည်ညီမျှပါလိမ့်မည် 2။ သင့်ရဲ့ terminal ကိုဖွင့်အချိန် 18 ဖြစ်တယ်ဆိုရင်: 00 နှင့်ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်အချိန် 21 ဖြစ်ပါသည်: 00, သို့ဖြစ်လျှင်ဤ parameter သည်ညီမျှပါလိမ့်မည် -3.
SummerAdjustment - (သာပိုမိုတိကျရလဒ်များအတွက်စမ်းသပ်အတှကျအသုံးပွု) နေ့ချွေတာရေးအချိန်ညှိနှိုင်းမှု။ အစစ်အမှန်ကုန်သွယ်ထဲမှာ "0" ကိုတန်းတူဖြစ်သင့်သည်။
default settings ကိုအကြံပြုကြသည်, သို့သော်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
အကြံပြုအကျိုးဆောင် - ပေါ်ပြန့်ပွားနှင့်အတူမည်သည့် 5-ဂဏန်း EURUSD 20 ထက်လျော့နည်း။
Scalper EA ၏
SZ Scalper အခမဲ့ EA ၏